» लकडाउनमा कसरी खुशी र स्वस्थ रहने ?
लकडाउनमा कसरी खुशी र स्वस्थ रहने ?
आफ्नो शरिरको लागि जहिल्यै ध्यान दिनुहोस् । माथि उल्लेख गरेका कसरत र व्यायाम आधा घण्टा मात्र गरे पनि तपाँइको शरिर र मष्तिस्क स्वस्थ रहन्छन् ।
सामाजिक दूरी कायम गरेर शारीरिक अभ्यास गर्दै घरमा रहनुस् । उपयुक्त विधिबाट साबुन पानीले हात धुनुका साथै व्यक्तिगत स्वच्छतालाई पालन गर्नुहोस् । प्रत्येक पटक कुनै उपकरण प्रयोग गर्नुअघि र पछि कीटाणुनाशक (स्यानिटाइजर) प्रयोग गरेर निर्मलिकरण गर्नुहोस् ।
(लेखिका फिजियोथेरेपिस्ट हुन् ।)